OPcache PHP tayaynta bootup > Vielhuber David
OPcache PHP tayaynta bootup09
Bogagga internetka ee ku saleysan WordPress , Joomla ama Laravel , tusaale ahaan, oo aan lahayn nuxur u gaar ah isticmaale, waxaa lagugula talinayaa inaad ku xafiddo dhammaan bogagga qaanad HTML ah oo keliya oo dib u cusbooneysiiya kaydka gacanta (ama si otomatig ah) marka isbeddelada lagu sameeyo xagga dambe. Si kastaba ha noqotee, haddii boggu ka kooban yahay waxyaabo firfircoon oo kuxiran kalfadhiyada iyo buskudyada ama sidoo kale luqadda iyo goobta, OPcache ayaa ku habboon .
Waxa loogu yeero waqtiga kabaha ee dhammaan seddexda nidaam ee la soo sheegay waxay ka badan tahay 100 ms oo leh server CentOS7 oo hadda la rakibay (oo leh SSD iyo PHP 7.1) Markasta oo qoraalka PHP la fuliyo, waa in lagu soo ururiyo bytecode waqtiga shaqada. OPcache hadda waxay ku hirgelisaa keyd-keedkan lambar - haddii isla qoraalka PHP lagu fuliyo codsiga soo socda, looma baahna in dib loo soo guuriyo. Ka dib markii aan hawlgelinno OPcache, waxaan dejineynaa dejinta soo socota:
Waqtiga fulinta (celcelis ahaan in ka badan 10 dil) ayaa hadda si weyn hoos loogu dhigay:
WordPress 4.7.4 Joomla 3.7 Marxaladda 5.4
aan lahayn OPcache 295 ms 201 ms 110 ms
leh OPcache 54 ms 59 ms 13 ms
Isir 5,5 3,5 8,5
Tan iyo markii aan u dejinnay ansaxinta_timestamps ilaa 0 isla mar ahaantaana revalidate_freq illaa hal maalin, keydku waligiis si otomaatig ah dib looma dhisin (waxaan si ula kac ah u sameynaa tan gacanta). Iyada oo guntin yar oo git ah , qoraalka PHP lagu fuliyo "jiid" kasta. Sida loo kiciyo jillaab:
Shaqada caawiye ee soo socota ayaa sidoo kale waxtar leh si loo qiyaaso qaybaha koodhka shaqsiyeed (ama waqtiga fulinta oo dhan):
Haddii aad rabto inaad hesho macluumaad waxtar leh sida xaaladda, xusuusta la isticmaalay ama tirada faylasha la keydiyay, waxaad adeegsaneysaa shaqadan PHP:
Si aan sidoo kale uga faa'iideysanno OPcache deegaan horumarineed oo maxalli ah (oo guud ahaan laguma taliyo), waxaan adeegsannaa xeelad.
OPcache waxay ku shaqeysaa dhamaan server-yada leh moduleka OPcache lagu rakibay isla markaana goobta opcache.enable si cad aan loogu dejin. Waxaan uga tagnay habkaas. Kaliya waxaan dejineynaa opcache.validate_timestamps = 1 ee php.ini .Tani macnaheedu waa opcache.revalidate_freq = 2. Tani waxay ka dhigan tahay in OPcache lagu celinayo ku dhowaad si joogto ah mashruuc kasta. Mashruucyada aan dooneyno inaan si joogto ah ugu shaqeyno OPcache, waxaan u adeegsanaa mashruuc la xiriira gudaha .htaccess dejinta soo socota:
Kadib waxaan dib u bilaabi doonnaa adeegaha shabakada waxaanan abuureynaa qoraalka soo socda:
Qoraalkani wuxuu nadiifiyaa keydka oo wuxuu dib u dhisaa isla waqti isku mid ah. Haatan waxaan u dejinay amarka RunOnSave goobta shaqada la xiriira ee tifaftiraha aan jecel nahay ee VSCode: